MaActuator vatengesi uye fekitori - China Actuators Vagadziri
Gasi-mvura booster humburumbira inowanzo kunzi booster humburumbira. Gasi-mvura inowedzera humburumbira inosanganiswa neyesilinda uye zvakanakira humburumbira uye kugadziridza dhizaini, iyo hydraulic mafuta uye yakasarudzika yekuzviparadzanisa, yakamanikidzwa mweya mu cylinder pisitoni tsvimbo yebasa rekubata chidimbu otomatiki mushure merwendo, kufamba kwekumhanya, kugadzikana, uye mweya wekufema. block mudziyo uri nyore, iko kuburitsa kugadziridza kuri nyore, kunogona kuwana yakakwira simba ye hydraulic yekudhinda mune iwo mamiriro akafanana, yakaderera simba kushandisa, inodzika kumhara haisi kukuvadza muforoma, nyore kuisa uye kuisa yakakosha yakamanikidzwa humburumbira inogona kunge iri 360 degrees mune chero Angle, nzvimbo inotora idiki, kusashanda zvakanaka kwekukwira kwetembiricha, hupenyu hwakareba, ruzha rwakaderera, uye zvimwe zvinhu zvepakati.Iyo yakamanikidzwa humburumbira INOSHANDISA mweya wezvemhepo kuzadzikisa simba repamusoro re hydraulic cylinder pasina kudikanwa kweiyo hydraulic unit.
Iyo yakatetepa humburumbira ndeye cylindrical simbi chikamu umo pisitoni inotungamirwa kuti idzokere munzira yakatwasuka. Svikiro rinoshanda rinoshandura simba rekupisa rive simba remuchina nekuwedzera mune humburumbira yeinjini; Iyo gasi inogamuchira kumanikidza kwepistoni mu compressor humburumbira uye kunowedzera kumanikidza. Dzimba dzeturbine, rotary piston injini, nezvimwewo, inonziwo humburumbira.
Yakatetepa humburumbira, ine compact mamiriro, kurema uremu, diki nzvimbo uye zvimwe zvakanaka.
Inonyanya kushandiswa kumisa pallet pane yekugadzira tambo, saka inonziwo humbowo hwekumira, nekuda kwekugadziriswa kwayo kwekushanda, saka kune mamwe makambani anonzi akagadziriswa-renji tsvimbo humburumbira.
Iyo inozungunuka humburumbira ndeye pneumatic actuator iyo INOSHANDISA kumanikidza mweya kutyaira goho mugodhi kuti idzorere kutenderera kutenderera mukati meimwe Angle renji. Inoshandiswa pakuvhura kwevhavha nekuvhara uye kufamba kwerobhoti, nezvimwe.
Standard humburumbira, inokodzera mafambiro ese ehupenyu, yakatsaurirwa kumidziyo yekubvisa guruva pane yakajairwa humbowo inotsigira kushandiswa kwevhavha yekusimudza uye magetsi emagetsi ekupomba.